पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता
आजैबाट ढुवानी सुचारु, इन्धन अभाव नहुने
श्रावण २७, २०७४ राजु चौधरी
काठमाडौं — पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले बिहीबारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । बिहीबार राति आयल निगम सञ्चालक समितिले माग पुरा गर्ने सहमति गरेपछि एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो ।
थानकोट डिपोबाट पम्पसम्म पेट्रोल ढुवानी गर्दा थप १० लिटर नोक्सानी क्षतिपूर्ति दिने भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो । अहिले थानकोट ढिपोबाट ४ हजार पेट्रोल ढुवानी गर्दा ३५ लिटर नोक्सानी पाउथे भने अब ४५ लिटर पाउने छन् ।
यस्तै डिजेलमा ४ हजार लिटर ढुवानी गर्दा २४ लिटर क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका व्यवसायीले नयाँ सहमति अनुसार अब २७ लिटर पाउनेछन् ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भने, 'अहिलेबाटै सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर ढुवानी सुरु गरिएको छ । अब इन्धन सहज हुन्छ ।'
संसदको आफूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले पनि बिहीबार नै माग सम्बोधन गर्ने जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ १६:४४
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
श्रावण २७, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित गरेको छ । डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको टोलीले बनाएको मस्यौदा समितिले पारित गरेको हो ।
समितिबाट पारित मस्यौदा संसदको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मागसहित डा. गोविन्द केसीले उठाएको मागमध्ये यो विधेयक पारित गर्नु पनि हो ।
केसी पक्ष र सरकार पक्षबीच वार्ता हुँदै
अनशनरत केसी पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच सिंहदरबारमा वार्ता हुँदै छ । केसी पक्षले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै समितिले पारित गरेको विधेयकमाथि गहिरो छलफल हुने र उक्त विधेयकले समेटेका कुरा अध्ययन गरेपछि डा केसीले आफू अनुसार निर्णय गर्नेछन् । वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, 'समितिबाट विधेयक पारित हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर डा केसीले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गरेपछि मात्रै अनशन तोड्ने वा नतोड्ने निर्णय लिनुहुनेछ ।'
परिसूचक बढे पनि कारोबारमा कमी
उखुमा उन्नत बीउसँगै प्रविधिको प्रयोग
निक्षेप जोगाउनै मुस्किल